Plex.Earth, tusaale wanaagsan oo ah dhexgalka suuqa Hispanic - Geofumadas
Plex.Earth, tusaale wanaagsan oo ah dhexgalka suuqa Hispanic
Janaayo, 2012 Google Earth / Maps, tabo cusub
Kaliya maanta ayaa la sii daayay bogga Isbaanishka ee bogga PlexScape, taas oo ka baxsan daabacaadda asalka ah ee Giriigta sidoo kale waxaa ku jiray Ingiriis iyo Faransiis.
Waxay u muuqataa in ay nala tahay anshax weyn, oo aan aragno calaamado ka hor, sababtoo ah Plex.Earth gudaheeda in ka badan luuqadaha 10 horey u soo galay Spanish ah ee version 2.0.
Hagaag, maahan dhadhan ahaan waa luuqada labaad ee ugu isticmaalka badan Google. Laakiin tani waxay sidoo kale sabab u tahay isbeddel muuqda oo ku aaddan waaxdan, oo meteleysa wax aan ka yarayn 500 milyan oo qof, in kasta oo adduunka oo dhan loo qaybiyo, waxay ku urursan yihiin qaaradda Mareykanka iyo Jasiiradda Iberia. Waaxda u bislaata maalin kasta suuq ahaan, halkaasoo in yar oo ka mid ah shirkadaha yar yar iyo xirfadleydu ay fahmeen muhiimadda ay leedahay adeegsiga softiweerka si sharci ah iyo dawlado inay qaataan siyaasado si ay maalgashi uga sameeyaan qaybta tikniyoolajiyadda.
Xaqiiqda caanka ah sidoo kale waa mid qiimo leh, waxay adeegsadeen tarjumaad bini-aadam ah, taas oo siinaysa waxa ku jira waxoogaa caddayn ah, oo ka soo horjeedda waxa Google Translate soo saaro isku daygeeda ugu wanaagsan ee lagu fahmayo rabitaankeena luqadeed.
Geofumadas wuxuu raadraacayay Plex.Earth muddo haatan laga joogo laba sano, wuxuuna kudhowyahay abuuritaankiisa. Hadda waxaan qiyaasi karaa abuuraheeda (Injineer madaniga ah), isagoo isweydiinaya seddex su'aalood oo hubaal in badan ay dhexda ka gudbeen:
Miyaa laga yaabaa inay suurtagal tahay in Google Earth ee AutoCAD, si looga faa'iidaysto sawirrada dayax-gacmeedka iyo adeegyada WMS ee lagu hayo halkaas?
Miyayna suurtagal noqon kartaa in lagu sawiro Google Earth, oo leh saxsanaanta ay bixiso AutoCAD, iyo keydinta xogta dwg?
Tani waxay la shaqeyn kartaa nooc kasta oo ah AutoCAD?
Waan ognahay in mawduuca uu dan guud ka leeyahay qayb kasta oo adduunka ka mid ah, laakiin macnaha guud ee Latin America waa qayb aad u danaynaysa ka faa'iideysiga Google Earth. Haddii aad ku nooshahay Nederland, oo aad rabto sawir dijitaal ah, waxaad ku xirmi kartaa oo keliya adeegyada wms ee ku bixiya bilaash, haddii waxa aad rabto ay yihiin sawir-qaadaha waxaad la aadi kartaa oo keliya Machadka Cadastral waxaadna ku heli kartaa qiimo macquul ah ama bilaash ah heshiiska Isdhaafsiga Khariidadda Miisaanka Weyn.
Laakiin haddii aad ku nooshahay Latin America ... (marka laga reebo waxyaabo aad u yar mooyee), sawirka tooska ah ee uu qaaday National Cadastre ee hantida dadweynaha lama heli karo, haddii aadan haysan dukumiinti uu saxeexay Madaxweynuhu, waa sababta oo ah iyagu ma haystaan ​​hadda ama waa inaad isaga siisaa qaniinyo. karraaniga inuu kuu iibiyo adiga hooseeya. Xaaladaha kale, way iibiyaan, laakiin qiimuhu waa halka ugu hooseysa liiska ... oo xitaa aadan gaarin markaad aragto qiimaha ay weydiistaan ​​khariidadaha cadastral oo qaab daabacan leh.
Marka Google Earth, oo leh xadadkeeda, waxay noqoneysaa mid soo jiidasho leh. Iyada oo leh shuruudo wanaagsan oo lagu hagaajinayo sahaminta goobta, waxay ku dhammaatay inay xal u noqoto daciifnimada hay'adaha iyo feejignaanta la'aanta si looga faa'iideysto kheyraad aan jirin.
Ugu yaraan dib u eegisyada aan ka hadalnay iyaga:
Maxay noqon doontaa Plex.Earth 2.5
Connect AutoCAD Google Earth
Abuur Curcaha Google Earth oo leh AutoCAD
Waa maxay PlexEarth 2.0
Isku-dubaridka UTM ee Google Earth
Waan ku faraxsanahay inaan aragno isbeddelada la soo jeediyay, oo ka muuqda noocii ugu dambeeyay, sidoo kale inay u arkeen Isbaanish suurtagal. Isagoo la hadlaya mid ka mid ah abuurayaasheeda, wuxuu xusay in ku dhawaad ​​saddex meelood meel macaamiisha hadda ay ku hadlaan Isbaanish.
Dhinaceena, waan ku soo dhaweynaynaa waxaanan rajeyneynaa in sheygan isbedelka ah la faafin doono, laga yaabee xidhiidhka ugu wanaagsan ee u dhaxeeya Google Earth iyo AutoCAD.
Post Previous" Hore Tintin, dib ugu noqoshada carruurnimada
Post Next Abuur Taageerada Qalabka Farsamada ee CivilCADNext »